Puntland oo weli ku adkeysaneysa in Shirka doorashooyinka uu ka dhaco Muqdisho - Awdinle Online
Puntland oo weli ku adkeysaneysa in Shirka doorashooyinka uu ka dhaco Muqdisho
Mamaulka Puntland ayaa wali ku adkeysanaya in shirkii uu ku baaqay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka dhaco magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya.
Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa markii uu baaqa shirka soo saaray waxaa uu sheegay in shirkaas lagu qabanayo magaalada Garowe ee xaruunta maamulka Puntland, hase yeeshee maamulka ayaa xiligaas sheegay in aan lagala tashan sidaas darteedna ay soo dhaweynayaan shirka balse ay iyaguna soo jeedinayaan in shirka lagu qabto Muqdisho.
Mucaaradka iyo maamulka Jubaland ayaa iyaguna Puntland ku raacay in shirka lagu qabto Muqdisho maadama ay xudun u tahay waxyaabo badan oo muhiim u ah shirka la doonayo in looga hadlo arrimaha doorashooyinka Soomaaliya.
Cabdullaahi Cali Xirsi Tima-cadde oo ah wasiirka war-faafinta maamulka Puntland kana mid ah guddiga maanta uu magacaabay raysal wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa BBC-da u sheegay in wali aaney waxba iska badalin mowqifkoodii hore ee ahaa in shirku uu ka dhaco caasimadda Soomaaliya.
Hadalkaan ka soo yeeray maamulka Puntland ayaa ku soo aadaya iyadoon ilaa iyo hadda la ogeyn halka shirku ka dhacayo kaas oo wakhtigii lagu baaqay ay saacado kooban naga xigaan.
Previous articleCumar Filish oo Amar deg deg ah siiyay Guddoomiyeyaasha degmooyinka Gobolka Banaadir
Next articleSenetarkii magaalada Garissa Maxamed Yuusuf Xaaji oo geeriyooday